नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा वैज्ञानिक विचार र कार्यशैली छैनः डा प्रसाई::Hamrodamak.com
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा वैज्ञानिक विचार र कार्यशैली छैनः डा प्रसाई
झापा, ३० बैशाख । माक्र्सवादी अध्ययता डा. खगेन्द्र प्रसाईले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा वैज्ञानिक विचार र कार्यशैली नभएको बताएका छन् । माओवादी अध्ययन केन्द्र झापाले बिर्तामोडमा आज आयोजना गरेको ऐतिहासिक भौतिकवाद तथा मानव मुक्ति बिषयक प्रशिक्षण कार्यक्रममा डा. प्रसाईले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले माक्र्सवादको आलोचनात्मक चेतलाई स्वीकार गर्न नसकेको बताए । ‘पार्टी जनवादी बहस र छलफल हुँदैन् ’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक विचार बोक्ने भनिएका कम्युनिष्ट पार्टीमा विचारको बहस हुँदैन ।’
नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशकसमेत रहेका डा. प्रसाईले नेपालमा समाजवाद ल्याउने हो भने कम्युनिष्ट पार्टी वैज्ञानिक विचार र कार्यशैलीबाट चल्नु पर्नेमा जोड दिए । विचार निर्माणको प्रश्न मुख्य नभएसम्म समाजवाद सम्भव नहुने बताए । उनले सात दशकसम्म स्थापित सोभियत संघको समाजवाद ढल्दा जोगाउन एक जना नागरिक पनि सडकमा नआएको कुराबाट नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले सिक्नु पर्नेमा जोड दिए । सोभियत समाजवादमा नागरिकका लागि सबै थोक भएपनि विचार निर्माणको प्रश्नमा राज्यबाट अलग्गिएका कारण त्यहाँको समाजवाद रक्षा गर्न नागरिक सडकमा नआएको बताए ।
डा. प्रसाईले नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्न वैज्ञानिक चेत भएका कार्यकर्तासहितको पङ्ति तयार गर्नु पर्ने बताए । कम्युनिष्ट पार्टीमा स्वस्थ आलोचना स्वीकार्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताए । कम्युनिष्ट पार्टीका विचार र व्यवहारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन नभएसम्म समाजवादी क्रान्ति हुन नसक्ने बताए ।
शिक्षणमा एमाले माओवादी सम्बद्ध कार्यकर्ता लगायतका क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । माओवादी अध्ययन केन्द्रका सचिव भानु दंगालले संचालन गरेको प्रशिक्षणको अध्यक्षता रमेश गुरागाईले गरेका थिए । सहभागिका तर्फबाट प्रदेश सांसद जसमायाँ गजमेर, माओवादी अर्जुनधारा नगर कमिटी अध्यक्ष भूपेन्द्र न्यौपाने र पत्रकार गोपाल झापालीले कार्यक्रम राम्रो भएको बताए । उनीहरुले माक्र्सवाद सम्बन्धी कार्यक्रम निरन्तर हुनु पर्ने बताए ।
आइत, बैशाख ३०, २०७५ मा प्रकाशित
पूर्व जनमुक्ति सेनाको प्रदेश भेला
दमक,५ माघ ।पूर्व जनमुक्ति सेना नेपाल प्रदेश नं १ को प्रदेश कमिटी गठन भएको छ । माओवादी सशस्त्र युद्ध लडेका लडाकूहरुको साझा संगठन भनिएको सो संगठनले केन्द्रीय भेला आयोजक समिति गठन गरे लगत्तै प्रदेशस्तरमापनि...
‘अनसनरत डा.केसीका माग पूरा गर’
विर्तामोड ,२ माघ । नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषय लिएर अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीका माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन झापा शाखाले बुधबार यहाँ आयोजना...